ညီလင်းသစ်: လူလေးရဲ့ ကြွက်ဧည့်သည်
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.11.12
ဟုတ်တယ်။ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ.သား ငယ်သွားလဲတာ တော်တော်စောတယ်ခေါ်ရမယ်။
ကျမ သားလေးဆိုအခု ၆နှစ်ပြည်.ပြီးတာတောင် တချောင်းမှ မလဲသေးဘူး။
မိဘမေတ္တာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေ့ခွင့်ရလိုက်တယ် ကိုညီလင်းသစ် ဖတ်နေရင်း ဒုတိယသွားလေးကျိုးသွားတော့ သားဒီညမအိပ်တော့ဘူးးး ကြွက်ကလေးဘယ်လိုလာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ကလေးများ သိသွားမလားလို့ စိတ်ပူမိသေးတယ်... :)
အဖေတယောက်ရဲ့ သားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာကို သားလေးကြီးလာရင် နားလည်သဘောပေါက် ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ
ဇွန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့လေ ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေ သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း သွားလေးတစ်ခါကျိုးသွားရင် ခြံထောင့်က အုန်းပင်အောက်နားသွားရပ်၊ သွားလေးကိုကိုင်ပြီး “ကြွက်ကလေးရေ ငါ့သွားနင်ယူ၊ နင့်သွားငါ့ပေး” လို့ ဆိုပြီး မြှောက်ပစ်လိုက်တယ်။း)
ွှအနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ ထုံမွှေးနေတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို တနင်္လာမနက်ခင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ ကြည်နူးမှုတွေ ဖြတ်စီးသွားတယ်။း)
သွားတွေကျိုးတိုင်း ငိုခဲ့တာပဲမှတ်မိတော့တယ်။ အရမ်းနာတယ်။ ပနှစ်မှာ အံဆုံးမခွဲထွက်နိုင်လို့ ခွဲရသေးတယ်။ အိမ်မှာ အဖေက သူ့သွားနှုတ်တော့ မျိုးရိုးအရ အဖေ့သွားကို လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားရမယ်ဆိုတယ်။ မဆွဲဝံ့လို့ သိမ်းထားတာတော့ ရှိသေးတယ်..ကြွက်ကလေးလိုသွားလေးတွေ မညီပဲ အခုထိ ရှေ့တချောင်းနောက်တချောင်း စောင်းပြီးနေတုန်းပဲ :(
ကြည်နူးဖွယ်ရာ မေတ္တာဖွဲ့ လေးမို့ဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းပါတယ်....။ ငယ်ငယ်က သွားကျိုးတိုင်း ..." ကြွက်ရေ....နင့်သွားနဲ့ ... ငါ့သွားနဲ့လဲရအောင်" လို့ ခပ်တိုးတိုးပြောပြီး ဟိုးခပ်ဝေးဝေး အပင်တွေကြား အစ်မတွေ အိမ်နီးချင်းကလေးတွေနဲ့တစ်စုလိုက် သွားပစ်ကြတာ မှတ်မိသေးတယ်.....။ ခပ်ဝေးဝေးပစ်နော် တော်ကြာ ကြွက်ကလေး မတွေ့ မှဖြင့်လို့သတိပေးတဲ့ သူကလည်း ပေးတယ်.......။။ :D :D :D
ကလေးဘ၀ရဲ့ ချစ်စရာ့ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေပေါ့........။။
ကိုညီနဲ့ မအိမ်သူက သားလေးအတွက် ကြွက်ကလေးဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးပေးကြတော့ ...။။...ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ဒီလိုပဲပေါ့ အပြင်မှာတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ လို့အမြဲ အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ တဲ့ ငယ်ငယ်က မေ့မေ့ပုံပြင်တွေကိုသတိရလာတယ်....။။း)
လက်တွေ့ ကလက်တွေ့ပုံပြင်က ပုံပြင်လို့သေချာ ခွဲခြားပေးခဲ့ ပေမယ့် ခုချိန်ထိ ပုံပြင်လေးတွေ ဖတ်ရတာကို နှစ်ခြိုက်တုန်းပါပဲ....။။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားသားလေးကတော့ ငယ်ဘ၀ကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်လေး ဖြတ်သန်းခွင့်ရတာ တချိန်ချိန်မှာ သူကျေနပ်စွာ မိဘတွေကို ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ.......။။။
ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးတဲ့ မောင်ညီလင်းတို့ရဲ့ မိသားစုလေးကို မြင်ယောင်တာနဲ့အတူ ကိုယ်တိုင် ကြည်နူးမှုလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ 'သား၏ စိတ်ကူးဥာဏ် ကွန့်မြူးစေဖို့ ခဏတာ ဖန်တီးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်' ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ လှည့်စားတာမသက်ရောက်ပါဘူးလေ။
တီတင့်ငယ်ငယ်တုန်းက အောက်သွားကျိုးတိုင်း အိမ်ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ကိုပစ်တင်သလို အပေါ်သွားကျိုးတိုင်း ခြံထဲမှာ မြေကြီးတူးပြီးမြှုပ်လေ့ရှိတယ် ဖွားဖွားတို့ သင်ပေးထားသလို 'ကြွက်လေးရေ ငါ့သွားနင်ယူ နင့်သွားငါ့ပေး' လို့ရွတ်လေ့ရှိခဲ့တယ်း)
သားသား လူပျိုပေါက်အရွယ်လောက်မှာ ဖေဖေကြွက်ကလေး အကြောင်းသိလို့ကတော့ ..ဟား ပါပါး ကလည်းဗျား .. ဆိုပြီး ပြောမယ်လို့ ကြိုမြင်ထားတယ်ဗျ ။
သားအတွက် သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ပဲ ကိုယ်လည်း အဖေ ဖြစ်လာမလား မလာဘူးလားမသိပေမယ့် နည်းစနစ်လေးတွေ အတုယူမှတ်သားထားတယ် နွေးထွေးမှုဟာ နှလုံးသားတွေကို နုညံ့စေတယ်မှတ်လား သားဟာ နွေးထွေးဂရုစိုက်မှုတွေကြောင့် နှလုံးလှလူသားလေး ဖြစ်လာမှာပါ ။
ဒါနဲ့ ကျနော်က ကြွက်၇ုပ်လေးတွေဆို သိပ်ချစ်တာ မွေးရက်နဲ့တိုက်လို့ လက်မှာတောင် ဆေမင်ကြောင် ကြွက်၇ုပ်ကလေးရှိသေး ၄ တန်းကျောင်းသားတုန်းက မုန့်ဖိုးရလို့ထိုးထားတာ ခုအရွယ်ကျတော့ အဲ့တာ ဟာသ ဖြစ်နေတယ် သူများတွေက ဘာရုပ်လဲ မေးတိုင်း ကြွက်ရုပ် လို့ ဖြေလိုက်တာနဲ့ ဟင်းး...ဆိုပြီး ဖြစ်သွားကြတယ် (စကားချပ် )
ဒီအဖေရဲ့ သားလေးငယ်သွားလဲတဲ့အကြောင်းချစ်စရာကောင်းစွာရေးထားပုံကိုအရမ်းသဘောကျတယ် ကိုညီလင်းလိုပဲ ညီမလဲ ငယ်တုန်းကသွားကျိုးသွားတော့ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ပစ်တင်ဖူးခဲ့တယ် ဆုတောင်းပြီးတော့လေ....း)
အိုး တကယ်ကို ကြည်နုးစရာကောင်းတဲ့ ကြွက်ကလေးပုံပြင်ပဲအကိုရေ
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သူကလေးရော ကြွက်ကလေးပါ မြင်ယောင်လာမိတယ်
သူ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို သတိတရရှိမိတိုင်း သူ့ကို
ပိုလို့တိုးပြီး ချစ်ခင်လေးစားမိလာမယ် ဆိုတာကိုပါပဲ....။
ဒီပို့စ်လေးက ကလေးတို့ရဲ့ ချစ်စရာ သဘာဝရယ် ... ဖခင်ရဲ့ မေတ္တာတရားရယ် ... ရောယှက်ခြယ်မှုန်းထားတဲ့ စာတပုဒ်ပါပဲ ... ကိုညီလင်း ... ။
ငယ်ဘ၀ကိုလဲ အမှတ်ရစေတယ်။ တဆက်ထဲ အမေ့ကိုပါ သတိရသွားတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူ့သားသမီးတွေရဲ့ သွားလေးတွေ ညီစေချင်လို့ စောစောစီးစီး ချိုးပေး နှုတ်ပေးခဲ့တာ ... ဒါပေမဲ့ သားသမီးအားလုံး သွားတွေမညီခဲ့ဘူး။ အမေ့မှာ စိတ်မကောင်းလို့ ခုထိ တဖျစ်တောက်တောက်ပဲ။ တကယ်တော့ သဘာဝအတိုင်း ကျိုးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လဲ ပိုကောင်းစေချင် လှစေချင်တဲ့ မိဘမေတ္တာအပြင် ကိုယ့်ကံလဲ ပါတာမို့ ကျမတို့တော့ မညီတဲ့သွားတွေကို ပြင်ဖို့မစဉ်းစားဘဲ သဘာဝအတိုင်းပဲ ထားဖြစ်တယ်။
ကိုညီလင်းရဲ့သား သွားအကြောင်းလေးဖတ်ပြီးငယ်ငယ်ကဂျက်လဲ အဲလိုလေးပဲ
ကြွက်ရေ နင့်သွားငါ့ကိုပေး ငါ့သွားနင်ယူလို့ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတယ် သင်ပေးတဲ့ဖေဖေ့ကိုလဲသတိရတယ်
သားလေးကြီးလာရင် ဒီပို့ စ်ကိုဖတ်ပြီး ၀မ်းသာနေမှာ။
ကလေးအဖေတွေကို လိုက်လေ့လာနေတာ။ ပျော်စရာကောင်းသား။ သားဖြစ်ဖြစ်၊ သမီးဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ယူမှဖြစ်မယ်။
ဘုန်းဘုန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သွားကျိုးလို့ရှိရင် မျက်စိကို မှိတ်ထားပြီးတော့ တစ်နေရာရာကို လွငု့်ပစ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒါလည်း အယူအဆတစ်မျုိုးပေါ့။ တီတင့်ပြောသလိုပဲ စာကိုဖတ်ရင်း နွေးထွေးချမ်းမြေ့တဲ့ ဒကာတော်ညီလင်းသစ်တို့ရဲ့ မိသားစုဘ၀ကို အထင်းသား မြင်ယောင်မိတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ တချို့ဆို ၈ နှစ်လောက်အထိ မလဲသေးတာလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်၊ သားက စောတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်လို့ပဲ ပြောရမယ် ထင်တယ်...၊း)
မေ့တာတော့ မပြောနဲ့ဗျို့၊ ကလေးနည်းနည်း ကြီးလာတာနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ကဟာတွေ အကုန်မေ့တာပဲ...၊း)
အခုထိတော့ မသိသေးဘူးဗျ၊ အဲ.. ကျနော့်ဘလော့ဂ်က ဒီပုံတွေကို သူလာမကြည့်မိဖို့ တော့လိုတယ်..၊း))
ကြွက်က အဲဒီအုန်းပင်ပေါ်မှာ နေတာလား?း) သူ့သွားတွေ ပေးရလွန်းလို့ ဇွန်တို့ကို တွေ့တာနဲ့ ကြွက်က 'ဟင်း.. ဒီမောင်နှမ နှစ်ယောက်တော့ လာပြန်ပဟ' လို့ မျက်ခုံးလှုပ်နေ ခဲ့မှာပဲ...၊း))
သွားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငိုခဲ့တာပဲ မှတ်မိတော့တယ် ဆိုလို့ ကျနော့်မှာ ပြုံးမိသေးတယ်၊ အင်း.. ပြုံးတယ် ဆိုတာကလည်း အခုမှပါဗျာ၊ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျနော်တို့အားလုံး နာလွန်းလို့ ကြောက်လန့်၊ ငိုယိုနေခဲ့ ကြတာပါပဲ...၊း)
ညီမရဲ့ ငယ်သွားလဲခန်းက အပေါင်းအဖော်တွေ တစုတဝေးကြီးနဲ့ ခမ်းနားလှချည့်လား၊း) ညီမမေမေရဲ့ ပုံပြင်တွေ အဆုံးသတ်ပုံကလည်း တမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်၊ ကလေးတိုင်းအတွက် ပုံပြင်တွေကတော့ လိုအပ်နေအုံး မှာပါပဲဗျာ...၊
ဟား.. တီတင့် ငယ်သွားကို စွန့်ပစ်တာ တယ်တိကျပါလား၊း) အပေါ်ဆိုအောက်၊ အောက်ဆို အပေါ်...၊း) ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ရတော့မှပဲ ကျနော်တို့ ကလေးဘဝက ငယ်သွားလဲပုံတွေကို ပြန်ပြီး အမှတ်ရလာတော့တယ် တီတင့်ရ..၊း)
ညီက လေးတန်းကျောင်းသား အရွယ်မှာ မင်ကြောင်ထိုးတာ ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ တကယ့်ကို အာဂသတ္တိပါလားဗျ..၊း) နောက်တစ်ခါ ကြွက်ရုပ်အကြောင်း မေးရင် ရိုးရိုးကြွက် မဟုတ်ဘူး၊ အာဂကြွက် Mighty mouse လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်ဗျ..၊ ကာတွန်းဇတ်ကောင် ကြွက်ကလေးလေ...၊း)
မမိုးလည်း ခေါင်မိုးဂိုဏ်းဝင် ပေပဲလား...၊း))
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီမရယ်...၊
အဲဒါဆိုရင် တော်သေးတာပေါ့ဗျာ၊ တော်ကြာ.. ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးပေးပါအုံး ဆိုမှ အခက်..၊ သူ ကြီးလာရင်တော့ အကြွေစေ့လောက်နဲ့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်ဗျ....၊း))
Thanks+ again...!!! :)
အမေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကို နားလည်ပါတယ်ဗျာ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ မမေလည်း သိတဲ့အတိုင်း ကလေးတွေရဲ့ သွားတွေကို စတီးလ်ကြိုးတွေနဲ့ ပြုပြင်ကြတာ အမြဲလိုလို တွေ့ရတယ်နော်၊ တကယ်တော့ ညီတာ၊ မညီတာထက် ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ကျေနပ် နေဖို့ပဲ ပိုအရေးကြီးမှာပါလေ...နော၊း)
ဟော... ဒီမှာလည်း တစ်ယောက်၊း) အဲဒီဓလေ့လေးက ကျနော်တို့ဆီက မိသားစု အတော်များများ လုပ်ကြပုံရတယ်နော်...၊
ကြီးလာရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ၊ လောလောဆယ်တော့ မမြင်တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်း...၊း)
ဒါဆို ဆုံးဖြတ်ချက် ကျသွားပြီပေါ့...ဟုတ်လား၊း)
ဓလေ့ထုံးစံတွေကို လေ့လာရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်ဘုရား၊ ငယ်သွားလဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့လူမျိုး အတော်များများမှာ ဓလေ့တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုရှိနေတာ တပည့်တော် သတိပြုမိတယ်၊ ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ ဘုရား...။
ဘယ်စာဖြစ်ဖြစ် ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ ။
မအိမ်သူ ရော ကိုညီလင်းသစ် ရေးတဲ့စာတွေ ဖတ်လား ..း)
မအိမ်သူ ရော ကိုညီလင်းသစ် ရေးတဲ့စာတွေ ဖတ်လား .. :)
ရေးတက်လိုက်တာဗျာ။ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ်တာတရားကို နွေးထွေးစွာမြင်နေရတယ်။ ၂၁ ရာစု ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ အတွေးအမြင်တွေနဲ့ပေါ့။ ကြွက်ကလေးပုံပြင်လေးအတိုင်းပဲ လှပနေပါစေ ကိုညီရေ။ သားလေးကြီးပြင်းလာရင် သူ့ကိုလှည့်စားတယ်လို့ မတွေးမိဘဲ၊ သူ့ကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပါးပါးကို သဘောကျနေမှာသေချာပါတယ်။ သားလေးအခု သဂျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့.... :P ။ သားလေးကို အကြွေစေ့တစ်စေ့ထဲ မပေးဘဲ အကြွေစေ့အများကြီးထည့်ပေးတဲ့ ကိုညီ့အကြောင်းဖတ်ရတော့ ကျွန်တော့်အဖေကိုသတိရသွားတယ်။ အဖေက ခရီးထွက်ရာကပြန်လာပြီဆို သူ့ခရီးဆောင်အိတ်ထဲက ချောင်ကြိုချောင်ကြားနေရာတွေ၊ မုတ်ဆိတ်ဓါးထည့်တဲ့ဗူးထဲတွေ၊ လက်ကိုင်ပ၀ါကြားတွေထဲ ပိုက်ဆံတွေကို သေးသေးလေးတွေခေါက်ပြီး ကြိုဝှက်လာခဲ့တယ်။ မေမေ့ကို ပိုက်ဆံအပ်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေကြား ခရီးဆောင်အိတ်ကြီးကို ပစ်ပေးလိုက်တာ။ ကျွန်တော်တို့တွေက အလုအယက်ရှာကြတာပေါ့။ သားသမီးတွေပျော်အောင် လုပ်တာလေ။ ကျွန်တော်က အငယ်ဆုံးဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုတော့ အမြဲတမ်း ဖွက်ထားတဲ့နေရာတွေကို Hint ပေးလေ့ရှိတယ်။ :P
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်သွားလဲချိန်ကို မိဘမေတ္တာအပြည့်ထည့်ပြီး သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ရေးထားတာများ ဖတ်လို့တောင် မဝအောင်ပါဘဲ။
ကိုယ့်ငယ်ဘဝတောင် တော်ရုံသတိမရခဲ့တာ ပြန်သတိရသွားတယ် ငယ်တုန်းက သွားကျိုးရင် အပေါ်သွားဆို မြေကြီးပေါ် ပစ်ချပြီး အောက်သွားဆို အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် ပစ်တင်ခဲ့တယ်လေ.. ကြွက်ရေ မင်းသွားငါ့ပေး.. ငါ့သွားမင်းယူဆိုပြီး ပါးစပ်ကလည်း အော်ရသေးတာ။ တကယ်တော့ ကြွက်သွားကဖြင့် သေးသေးလေးတွေနော်။ အဟုတ် လာမပေးတာ တော်ပါသေးရဲ့ .း))
ခုလို ကြွက်ကလေးတော့ အကြွေစေ့ လာမပေးခဲ့ဖူးဘူး။း)
အဖေကြီးက စာရေးကောင်းတော့ ပိုပိုဖတ်ကောင်းတာပေါ့
ကြီးလာရင်တော့ သားက သိသွားမှာပါ ..ကြွက်က အဖေဆိုတာကိုပေါ့ ဟိဟိ ..
ဒယ်ဒီ ဖားသား မစ်ကီ .. ဟီး
ဥရောပကရော မြန်မာပြည်ကရော သွားပုံပြင်လေးတွေထဲမှာ ကြွက်ကလေးတွေပါတယ်နော်၊
အကောင်သေးသလောက် သစ်သားပါ ပဲ့အောင်ကိုက်နိုင်တဲ့ အာဂသွားပိုင်ရှင်လေးတွေမို့ ထင်ပါရဲ့  :)
ကလေးတွေက သူတို့ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်နော်။ ဒီတစ်ခုပြီးရင် နောက်ဘာထပ်ဖြစ်ဦးမလဲဆိုတာမျိုး သိချင်ကြတယ်။ ကြွက်ဖေဖေကြီးရဲ့ သားသားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်တို့ မိသားစုရဲ့ နွေးထွေးမှု့ကို သိပ်သဘောကျမိတယ်။ သားကို ပြုစုပျိုးထောင်တာလဲ အဖေနဲ့ အမေ ၂ယောက် တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ သိပ်ပြီး စည်းစနစ်ကျတာပဲလို့ အားကျမိတယ်....
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက သွားကျိုးတဲ့အခါမှာ သွားကျိုးလေးကို ကိုင်ပြီး ကြွက်ကလေးရေ နင့်သွားငါ့ပေး ငါ့သွားနင်ယူဆိုပြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို ပစ်ပစ်တင်တာကို သတိရမိလိုက်တယ်...
သူ မဖတ်လို့ ဘယ်ရမလဲလေ...၊ တော်ကြာ ရွာနားမြက်ကို ရွာနွား မစားဘူး ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ ...း))
မောင်နှမတွေ ပိုက်ဆံအလုအယက် ဝိုင်းရှာကြတာ တကယ့်ကို ပျော်စရာကြီး နေမှာပဲ၊ အဖေ ခရီးက ပြန်လာလို့ ပျော်တာက တစ်ခု၊ ပိုက်ဆံတွေ ရှာရင်း ပျော်ရတာက တစ်ခု..၊ ဒီကြားထဲ hint ပေးခံရရင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ၊ အဲဒီ အတွက် ပျော်ရတာက တစ်ခု...၊း)
ဟော.. မချောလည်း ငယ်သွား လွှင့်ပစ်တာ တီတင့် လိုပါပဲလား၊း) အင်းနော်... မချော ပြောသလိုပဲ၊ တကယ်သာ ကြွက်သွားလေးတွေ ရရင် လူက အကြီးကြီး၊ သွားက သေးသေးလေးနဲ့ ဘယ်မိုက်မလဲ၊း)
ဒယ်ဒီ ဖားသား မစ်ကီ... ဟားဟားဟား၊ ညီမက တော့လေ...၊ သဘောတကျနဲ့ ထိုင်ရယ်နေမိတယ်..၊း)
ကြွက်ကလေးတွေ ပါရခြင်းအကြောင်း တွေးထားတာလေး သဘောကျတယ် မညို...၊း) ဟုတ်မယ်ဗျ၊ ကြွက်သွားတွေက မာတဲ့အပြင် ညီညီညာညာ ရှိလှတာကိုး၊ သွားတက်နဲ့ကြွက် ဆိုတာ ကျနော်တော့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူးဗျ...၊း))
ကြွက်ဖေဖေကြီး.. ဆိုလို့ လန့်ပြီး ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်မိတယ်ဗျ..၊ စုတ်ချွန်းချွန်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ ဘာတွေ ပေါက်နေပြီလားလို့...၊း)
ဒီလိုပါပဲ နှင်းရာ...၊ ကျနော်တို့လည်း အခြားအခြားသော မိဘတွေလိုပါပဲ..၊ ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ရှာကြံ၊ ပြုစု၊ ပျိုးထောင်နေတာ ပါပဲဗျာ..၊ ကွန်မန့်လေးအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်...။
Story here is that tooth fairy comes and picks up the tooth under the pillow at night to give it to an infant who is in need of new tooth, just givingasense of sharing, and asareward fairy leaves coin(s) or present for the kid. We had been acting tooth fairy past3months and collected 8 teeth from our twins as they'd collected some coins. We didn't want to throw away those loose teeth, so saved it inachest inside the closet, somehow one day one of my girls found it and she went .."Wow..tooth fairy forgot to take our teeth!!"
ဒကာတော် ညီလင်းသစ်ရေ မင်္ဂလာပါ ပြင်သစ်လို နှုတ်ဆက်ချင်နေတာ။ ဟီး မနှုတ်ဆက်တာနဲ့ မြန်မာလိုပဲ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ Comment တွေ ပြန်လာဖတ်တာ။ အထူးသဖြင့်တော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Comment လေးတွေက ဒကာတော်ကနေ ပြန်ပေးတဲ့ Comment လေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ Fb လောကနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အနောနီးမတ်စ် (လီယို) ရဲ့ Comment ကို like လုပ်သွားပါတယ်။
တစ်ပုဒ်လုံးကို ဖတ်ပြီး ကြည်ကြည်နူးနူးလေးခံစားနေမိတယ် ကိုညီ
သားကလေး ငယ်သွားလဲတာ ဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာ မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါလေးကိုပဲ မေတ္တာနဲ့ ရေးသွားတော့ အက်ဆေးလေးက ကြွနေတယ်
သားကလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ စူးစမ်းမှု၊ တက်ကြွမှု၊ ၀ံ့ကြွားမှု၊ အားကိုးယုံကြည်ချစ်ခင်မှုတွေကို တရိပ်ရိပ် ပေါ်လွင်အောင် ရေးသွားတာ အင်မတန် ချစ်စရာကောင်းလှတယ်......
သားဖေဖေ နဲ့ မေမေ ရဲ့ သားအပေါ် ချစ်ခင်မှု မေတ္တာ၊ သားအပေါ် ပဲ့ပြင်ပေးလိုတဲ့ စိတ်၊ သား စိတ်ကလေး အတိမ်းအစောင်းဖြစ်မှာ၊ သား ပျော်၇ွှင်ဝမ်းသားချင်တဲ့ စိတ် ဒါလေးတွေကို ကြည်နူးမှုတွေနဲ့ ဖတ်ရတဲ့ အတွက် တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
သိင်္ဂါရ ရသ မြောက်တဲ့ အက်ဆေးလှလှလေး တစ်ပုဒ်ပါရှင်.......အားပေးလျှက်ပါ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အပြည့်အ၀ထုံလွှမ်းနေတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ... သားသားလေးက ကိုညီလင်းသစ် နဲ့ မအိမ်သူတို့ သားဖြစ်ရတာ အရမ်းကံကောင်းတာပဲ
ကိုညီလင်းသစ် အရေးအသားလေးက သွပ်သွပ်လေးနှင့်ရင့်ကျက်တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ အရေးအသားလေးပဲဗျို့ .. အကို့သားလေးကအတော်ကံကောင်းတာပဲဗျ ..
စကားမစပ် ကျွန်တော့်ငယ်ဘဝမှာက အဘွားကပြောပြတဲ့ လုပ်နည်းအရ ငယ်သွားလဲတဲ့သွားအကျိုးကို “ ကြွတ်ရေ နင့်သွားနှင့်ငါ့သွားလဲရအောင်ဟေ့ ” လို့အော်ပီး အိမ်ခေါင်ပေါ်ပြစ်တင်ရတယ်ဗျ ၊ အဲ .. အဲဒီအချိန်မှာ အသက်ကလဲအောင့်ထားရသေးဗျးD
အကျိုးဆက်ကတော့ သွားတွေ ညီညာဖြူဖွေးပီး သန်မာအောင်ပေါ့ဗျာ ...
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ငယ်ငယ်ကတော့ အပီအပြင်ကိုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျ .. အဟီး
ကြွက် ကြွက် နင့်သွားငါ့ပေး
မညီပါဘူး.. မညီလို အသက်ကြီးလာမှ ကွကို
Anonymous, ဘုန်းဘုန်းတောက်၊ မရွှေအိမ်စည်၊ HH, ကိုမိုးဇက်၊ ညီမblackroze ...
ကွန်မန့်လေးတွေအတွက် အယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။း)
ကြည်နူးစရာပို့စ်လေးပဲ..။ သား Rise of the Guardians ကြည့်ပြီးသွားပြီလား.... အဲဒီထဲမှာ Tooth Fairies လေးတွေလည်းပါတယ်... ကာတွန်းလေးကကောင်းတယ် သားသားကြိုက်မှာသေချာတယ်...။ ကျွန်တော်တောင်ထွက်ထွက်ချင်း ကလေးလုပ်ပြီးသွားကြည့်ဖြစ်သေးတယ်...။ :D
အကိုလို အဖေမျိုး ရှိတဲ့ သားသားအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်စရာ.... ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အစစအရာရာ ဂရုထားစရာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အကို့ရဲ့ ပို့စ်တွေ..ကနေတစ်ဆင့် သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါလို့..
သွားလေးတွေ လှပစေဆိုပြီး အိမ်ခေါ်မိုးပေါ် ပစ်ဖူးသလားပဲ..သားသားရဲ့အတွေ့ အကြုံလေးက တကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတယ်.
အင်း ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကငယ်သွားလဲတုန်းကအကြောင်းလေးပြန်တွေးမိတယ်။ပြတင်းပေါက်ကြီးနဲ့အပြောခံရရင် ငိုချင်လိုက်တာ..အကို့သားလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆင်တယ်..ငယ်ငယ်လေးနဲ့ငယ်သွားလဲပြီး၁၈နှစ်လောက်မှာအံဆုံးအကုန်ပေါက်ပြီးပြီ။အသက်မြန်မြန်တိုမလားတော့မသိ..